Farmaajo oo qabsanaya doorasho hal dhinac ah, si uu ugu shubto! | XAL DOON
Home NEWS Farmaajo oo qabsanaya doorasho hal dhinac ah, si uu ugu shubto!
Farmaajo oo qabsanaya doorasho hal dhinac ah, si uu ugu shubto!
Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Sabtida maanta ah waxa ay ku dhawaaqdey in la guda galayo doorashooyinka dadban ee sanadka 2020-21 xilli uu khilaaf taagan yahay hanaanka doorashooyinka Soomaaliya.
Villa Somalia iyo maamuladda taageersan ee kala ah, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo HirShabelle oo uu wehliyo gudoomiyaha gobolka Banaadira ayaa isku raacay doorasho haldhinac.
Wasiirka iyo hoggaamiyaasha maamuladda oo si wadajir ah muuqaal u soo duubay ayaa cadeeyay in ay gudda galayo doorashooyinka aan laga heshiin ee Soomaaliya.
“Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish, ayaa ku dhawaaqay in Xukuumaddu ay go’aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka, si aan wakhti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xaiska Ra’iisul Wasaaraha.
Qoraalka ayaan lagu soo qaadin in wadahadalada ay qeyb ka ahaayeen madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay’adda nabad-sugida iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo go’aankan muhiim u ahaa sida ay cadeeyeen ilo ku dhow Villa Soomaaliya.
Go’aanka ay madaxdan ku shirtay Muqdisho isla qaateen ayaa ah in Koonfur Galbeed, Galmudug iyo HirShabelle ay qabtaan doorashooyinka xubnaha baarlamaanka.
Si lamid ah, waxa ay isla qaateen in xulista wakiilada maamulka Somaliland ee xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka lagu qabto magaaladda Muqdisho.
Qoor-qoor ayaa ku fashilmay waan-waan uu ka dhex-waday dowladda iyo maamulada Puntland iyo Jubaland kuwaas oo tabasho ka qaba qaabka fulinta heshiiskii siyaasadeed ee 17-kii September.
Qodobada la isku hayo ayaa kala ah; gudiyada doorashooyinka ee magacaaban oo Villa Soomaaliya faragelisay, habraaca xulista Xildhibaanada gobolada waqooyi, iyo ciidanka la geeyay gobolka Gedo, oo caqabad ku ah in Jubaland sidda maamulada kale u maamusho doorashooyinka xubnaha baarlamaanka ee halkaas ka dhacaya.
Madaxweyne-yaasha Jubbaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan magaalada Caasimadda u ah Puntland ee Garowe ayaa laga wadaa in ay dhawaan la hadlaan warbaahinta si ay u cadeeyaan go’aankooda ku aadan doorashada halka dhinac ah ee ay ku dhawaaqeen Xukumadda iyo maamuladda taageersan.